Ciraaq: Qaraxyo Dhowr ah oo Dad ku Dhinteen
Qaraxyo baabuur oo ka kala dhacay meel ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee magaalada caasimadda ah ee Baqdaad iyo magaalada koofurta ku taala ee Basra, ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 31 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in Isniintan maanta ah ay Baqdaad ka dhaceen sideed qarax oo loo adeegsaday gawaari. Magaalada Basra oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ayaa waxaa iyana ka dhacay laba qarax.
Weeraradan ayaa imaanaya xilli ay dalkaasi ka jiraan qalalaase ayna xiisadda u dhaxeysa Shiicada iyo Sunniyiinta laga badan yahay ay cirka isku sii shareereyso.
Qaraxyada iyo rabshadaha kale ee ka dhacay dalka Ciraaq todobaadkii tegay, ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, kuwaasoo ay ku jiraan 70 qof oo maalintii jimcaha ku dhintay qaraxyo dhowr ah oo lala eegtay dadka Sunniyiinta ah.
Sunniyiinta ayaa muddo dhowr bilood ah dhigayey dibadbaxyo ka dhan ah Ra’iisul-wasaare Nouri Al-Maliki, iyagoo ku eedeynayey dowladdiisa inay iska indhatirto baahidooda ayna si bartilmaameedsi ah u xirxirto dadka sunniyiinta ah.
Qalalaasahan ka soo cusboonaaday dalka Ciraaq, ayaa keenay cabsida ah inuu dib u soo laabto dagaal diimeedkii ay sanadihii 2006dii iyo 2007dii ku dhinteen tobanaanka kun ee qof.
Waxaa muuqanaysay in tirada dhimashadu ay halkaas hoose uga soo dhacday, hase ahaatee QM ayaa sheegtay in bishii April la dilay 712 qof, taasi oo ah bishii ugu dhimashada badneyd dalka Ciraaq tan iyo bishii June ee sanadkii 2008dii.